​कहिल्यै नदेखिएको जात्रा शहरमा « Jana Aastha News Online
​कहिल्यै नदेखिएको जात्रा शहरमा
प्रकाशित मिति : ३ भाद्र २०७४, शनिबार १६:०८
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विभाजनका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले चालेको पछिल्लो कदमले एकैसाथ दुईवटा कुरा प्रष्ट पारेको छ । एक, दलको नामपछाडि ‘प्रजातान्त्रिक’ पुच्छर झुण्ड्याएर अलग घर बनाउन पुग्ने गरी पशुपति समशेर जबराले केन्द्रीय सदस्य जुटाउन सकेका रहेनछन् ।
अर्को, निर्वाचन आयोग (अप्रत्यक्ष रुपमा वर्तमान सरकार) जसरी पनि सो पार्टी फुटोस् र कमल थापालाई कमजोर पार्दै नयाँ दलले मान्यता पाओस् भन्ने इच्छा राख्दो रहेछ । नत्र साउन २९ गते आइतबार नयाँ दल दर्ता गर्न आवेदन दिने राणापक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरुलाई हस्ताक्षर सनाखतको लागि बोलाएकोमा सो दिन सबै आउन सकेनौं, समय चाहियो भनेकै भरमा गोरखापत्रमा सूचना निकालेर एक हप्ताको थप म्याद दिइने नै थिएन । किनकि यसअघि यस्तो काम कोही कसैको हकमा भएको पाइन्न । यसले के देखाउँछ भने हाल आयोगमा दर्ता गरेको सूचिमा ज–जसको नाम र हस्ताक्षर छ, ती सबै अहिलेसम्म पार्टी फोड्न तयार भएका व्यक्ति होइनन् । अर्थात् त्यहाँ गड्बडी छ, केहीको हस्ताक्षर किर्ते छ । तर अब भने प्राप्त थप समयलाई सदुपयोग गर्दै पशुपति समशेरले नक्कलीलाई सक्कली र नमान्नेलाई राजीखुशी पार्ने कुरामा कुनै शंका छैन । कोही विदेशमा छन् भन्नु, पटक–पटक समय माग्नुले संख्या नपुगेको कुरालाई प्रष्ट त पारिसकेको छ नै अदालतको पेशी जस्तै गरी समय सारिरहनुको अर्थ के हुनसक्छ ? राप्रपाको फुटलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषकहरु भन्छन्, ‘त्यो स्वतस्फूर्त फुट हुँदै होइन ।
पूर्ण रुपमा प्रायोजित र प्राविधिक रुपमा समेत असफल प्रयत्न हो । जसलाई प्राविधिक रुपमा पूर्णता दिने प्रयास जारी छ ।’ कमल थापानिकट एक नेताले यसलाई ‘फुटाएको कुरा जायज छ भनेर नेता खरिद बिक्रीको लागि अवसर दिएको रुपमा आफूले लिएको बताएका छन् ।’ सनाखत भन्ने कुरा त संसदमा कसैले राजीनामा दिएको, अविश्वास प्रस्ताव या महाअभियोग दर्ता गर्ने जस्ता आम चासोका विषयमा निवेदकको सक्कली दस्तखत हो वा होइन बुझ्न पो गरिन्थ्यो । तर निर्वाचन आयोगले यो ठट्टा गर्नुको अर्थ के ? औचित्यता के ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । त्यसो त थापापक्षीयहरु राणाले आवश्यक संख्या नपु¥याउनेमा ढुक्क छन् । उपसभामुख गंगा यादवले त्यही भएर नै लैनचौरको भोजमा भनेको हुनुपर्छ– २२ मध्ये १९ मा झरेका थिए अहिले उतापट्टि चालिस प्रतिशत नपुग्ने देखिएपछि जम्मा १३ मा ओर्लिएका छन् । धरानका रामकुमार सुब्बाहरु पनि फर्किसकेका छन् ।
तर निर्वाचन आयोगले कतिसम्म अचाक्ली गरेको देखिन्छ भने पार्टी फुटाएर नयाँ खोल्न चाहन्छौं भन्दै साउन २२ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन हाल्नेको संख्या जम्मा ६४ जना मात्र छ । साउन २७ गते हस्ताक्षर सनाखतको लागि पूरै १५६ जनालाई २९ गते आउन पत्र काटियो । त्यसको जवाफमा पशुपति समशेरले २९ गते आफूले ६४ जनाको हस्ताक्षर बुझाएको र उनीहरुको सनाखत गराउन अनुरोध गर्दै पत्र लेखे । थप समय चाहिने, कोही विदेशमा रहेकाले बोलाउनुपर्ने भन्ने जिकिर सो पत्रमा छ । तर, निर्वाचन आयोगले भने पूराका पूरा १५६ जना नै आएर आफू कतापट्टिको हो लाइन लागी सनाखत गर्न ३० गते सूचना नै जारी गरी भदौ ४ गतेको मिति तोकेको छ ।
अब एउटा अनौठो दृश्य सो दिन देख्न सकिने भएको छ निर्वाचन आयोगमा दल फुटाउने र दल जोगाउने सबै एउटै लाइन लागेर सनाखतमा हाजिर हुनुपर्ने । तर, यो किन ? केका लागि ? सबै दैव जानुन् या निर्वाचन आयोग जानोस् तर यस्तो गाईजात्राको औचित्य भने पुष्टि हुन गाह्रो छ ।